Aprimo sy ADAM: Fitantanana ny fananana nomerika ho an'ny dian'ny mpanjifa | Martech Zone
Aprimo, sehatry ny asa marketing, nanambara ny fanampiana ny ADAM Digital Asset Management rindrambaiko ho an'ny tolotra miorina amin'ny rahona. Ny sehatra dia nekena ho mpitarika ao The Forrester Wave ™: Fitantanana ny fananana nomerika ho an'ny traikefan'ny mpanjifa, Q3 2016, manome ireto manaraka ireto:
Fampiroboroboana ny tontolo iainana mirindra amin'ny alàlan'ny Framework Integration Aprimo - Afaka mahazo fahitana tsaratsara kokoa ny marika ary mifandray tsara kokoa amin'ny tontolo iainana ara-barotra miaraka amin'ny tombony fanampiny amin'ny rafitra fampidirana malalaka sy malefaka an'i Aprimo ao anaty rahona.
Convergence of Marketing Resource Management (MRM) sy DAM - Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny Aprimo Digital Asset Management miaraka amin'ny fahaiza-manao mombamomba an'i Aprimo Marketing Productivity, ny mpivarotra izao dia mahazo ny vahaolana roa mifototra amin'ny cloud, ahafahan'ny fitantanana ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa tsy manam-paharoa.
Fidirana haingana kokoa amin'ny fanavaozana fanavaozana - Ny mpanjifa dia manana fidirana mitohy amin'ny fanatsarana ny sehatra farany misy fampiasa vaovao mamoaka mandeha ho azy sy amin'ny fotoana voafetra.
Fotoana fohy hanomezana lanja tsy misy fanelingelenana amin'ny orinasa - Ireo mpivarotra dia afaka miarina miaraka amin'i Aprimo afaka herinandro vitsivitsy. Plus azon'izy ireo jerena haingana kokoa ny tombotsoan'ny fampiasam-bolany amin'ny alàlan'ny metodôlika haingana an'i Aprimo ho fampandehanana fotoana fohy izay mampihena ny fotoana anaovana tsena - volana na herinandro.
Filaminan'ny kilasy manerantany, azo itokisana ary azo zahana tohanan'ny Microsoft Azure - Ny fotodrafitrasan'ny rahona an'i Aprimo dia namboarina hatrany ifotony, manome fiarovana sy fahombiazana ary fahatokisana manerantany 24/7 an-dakilasy miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny rahona, tohanan'ny Microsoft Azure.
Ny mpandalina Forrester Nick Barber dia naneho hevitra momba ny fomba hahitan'ny mpivarotra lanja ny nahazoan'i Aprimo ny ADAM Software farany tao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny Nahazo an'i Aprimo ny fanamafisana ny tsenan'ny ADAM Software Signals, manambara:
Ny tombony mazava azo avy amin'ity fanakambanana ity dia izao dia hanana vahaolana tokana ny mpivarotra manerana ny androm-piainan'ny atiny rehetra.
Ankehitriny, miaraka amin'ny fifindrany mankany amin'ny rahona, ny tanjaky ny ADAM ao amin'ny DAM (Digital Asset Management) dia manambady miaraka amin'ny tombotsoan'ny rahona, manome ny fahatsapana sy ny fahaiza-manao ary ny fahombiazan'ny orinasa mpivarotra.
Ao amin'ny taonan'ny mpanjifa isika. Ireo fikambanana ankehitriny dia mifaninana amin'ny traikefan'ny mpanjifa azon'izy ireo omena. Na izany aza, ny mpivarotra dia tototry ny ranomasina misy atiny manandrana manome ny traikefa mety amin'ny fantsona marina. Avo ny tsatoka ho an'ny mpivarotra. Saingy miaraka amin'i Aprimo, manana vahaolana tokana mifototra amin'ny rahona izy ireo ankehitriny mba hitantanana ny androm-piainan'ny atiny iray manontolo, miampy ny fahaizana mandanjalanja sy mivezivezy amin'ny tontolo nomerika voalohany. John Stammen, CEO an'ny Aprimo
Tafiditra ao amin'ny fanolorana SaaS vaovao ihany koa ny Aprimo Product Content Management. Tafiditra tanteraka amin'ny Aprimo DAM, avelan'i Aprimo ny fikambanana manerantany hitantana ny mombamomba ny vokatra sy ny votoatin'ny marketing amin'ny toerana iray mba hanafainganana ny famoahana vokatra, handefasana ny famoronana atiny ary handaminana traikefa ateraky ny vokatra atosiky ny vokatra ao anaty rahona.
Ny marika orinasa misy indostria manerana ny fahasalamana, ny fomba fiainan'ny mpanjifa ary ny jiro, ao anatin'izany ireo fikambanana toa an'i Phillips, ASOS ary Home Depot, dia efa nisafidy ny Aprilimo Digital Asset Management.
Vaovao misimisy momba ny Aprimo Digital Asset Management
Tags: Adamaprimofitantanana fananana nomerika aprimoASOSFitantanam-panananatohodranon'ifitantanana fananana nomerikafananana dizitalytrano fanatobiana tranoPhillips